बाथरोग : लक्षण र उपचार – Chitwan Post
बाथरोग : लक्षण र उपचार
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ४, २०७६
बाथरोग भनेको के हो ?
बाथरोग भन्नाले कुनै एउटामात्र रोग नभएर विभिन्न रोगहरुको संकलनलाई बुझाउँछ । अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी प्रकारका बाथरोगहरु पत्ता लागिसकेको छ ।
यो रोग प्रायःजसो अटोयिमुन प्रोसेसको कारणले हुन्छ । हाम्रो शरीरमा बाहिरी जीवाणुसँग लड्नका लागी विशेष कोशिकाहरु हुन्छन् । जब कुनै कारणवश यी कोशिकाहरुले आफ्नै शरीरका विभिन्न अंगहरुलाई आक्रमण गर्न थाल्छन्, त्यसलाई अटोयिमुन प्रोसेस भनिन्छ । यस अटोयिमुन रोगहरुमा बाथरोग, डाइबेटिज, थाइराइड तथा अन्य रोगहरु पर्दछन् ।
बाथरोग हुनुको कारण के हो ?
बाथरोग लाग्नुको ठीक कारण अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । तर, जेनेटिक र कुनै विशेष जीवाणुको संक्रमणको कारणले भने बाथ लाग्न सक्छ । यसैगरी, चुरोटको धूवाँले बाथको मात्रा बढाउन सक्छ ।
बाथ कति प्रकारका छन् ?
अहिलेसम्म १०० प्रकारका भन्दा बढी बाथ पत्ता लागिसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा प्रायः जसो देखिने बाथ ः गठिया बाथ, कुरकुरे हड्डी खिइने बाथ, हड्डी मक्किने बाथ, युरिक एसिडको बाथ, मेरूदण्डको बाथ, लुपस, मांसपेशीको बाथ आदि हुन् । यीबाहेक अन्य प्रकारका बाथ पनि देखिने गरेको छ ।
नेपालमा बाथको संख्या कति छ भनेर कुनै तथ्यांक त अहिलेसम्म छैन । तर, विश्व तथ्यांकअनुसार विश्वको १० प्रतिशत जनसंख्यालाई बाथरोग हुने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले नेपालमा पनि प्रायः ३० लाख बाथरोगी हुनुपर्छ ।
बाथका लक्षणहरु के–के हुन ? कसलाई हुन सक्छ ?
बाथको प्रकारअनुसार लक्षणहरु भिन्नभिन्न हुन्छन् । प्रायःजसो सबै बाथमा हुने लक्षण भनेको जोर्नीहरु दुख्नु हो । साना तथा ठूला जोर्नीहरु दुख्ने, सुन्निने र अरठ्ठो हुने प्रारम्भिक लक्षणमा पर्छ । समयमै उपचार नगर्दा जोर्नीहरु बिस्तारै बांगिँदै जान सक्छ ।
गठिया बाथ :
यो बाथ प्रायःजसो ४० वर्ष कटेका महिला मान्छेमा बढी देखिन्छ । पुरूषमा भन्दा महिलामा यो तीन गुणा बढी देखिएको छ । यस बाथमा जोर्नीहरु दुख्ने, सुन्निने र अरठ्ठो हुने अनि बिस्तारै बाङ्गिँदै जाने हुन्छ ।
कुरकुरे हड्डी खिइो बाथ :
यो बाथ प्रायःजसो ५० वर्ष कटेका महिला र पुरूषमा बढी देखिन्छ । यसमा धेरैजसोको घुँडाको जोर्नी तल–माथि गर्दा अथवा उकालो–ओरालो हिँड्दा दुख्ने गर्छ । यसले हातका साना जोर्नीमा पनि असर गर्न सक्छ ।
यो प्रायःजसो ४० वर्ष कटेका पुरूषमा देखिने बाथ हो । युरिक एसिडको बाथ महिला र बच्चामा धेरै देखिँदैन । यस बाथमा प्रायःजसो खुट्टाको बूढी औँला रातो भएर सुन्निएर बेस्सरी दुख्ने गर्छ र ४–५ दिनमै आफैँ निको भएर जान्छ । यस्तो दुखाइ वर्षदिनमा २–३ पटक हुन सक्छ ।
यो बाथ तन्नेरी महिलाहरुमा बढी पाइन्छ । यसमा जोर्नीहरु दुख्नुका साथै कपाल धेरै झर्ने, मुखमा बारम्बार घाउ आउने, घाममा जाँदा अतिरिक्त पोल्ने र डाबर आउने तथा चिसोमा औँलाको रंग परिवर्तन हुनेजस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् ।
मांसपेशीको बाथ :
यो पनि महिलामा बढी देखिने एक प्रकारको बाथ हो । यसमा शरीरका विभिन्न मांसपेशीहरु दुख्ने, कटकटी खाने, आलश्य लाग्ने, निद्रामा समस्या हुने, बारम्बार टाउको दुख्नेजस्ता लक्षण हुन सक्छन् ।
बाथ बच्चादेखि वृद्घसम्म सबै उमेरका मानिसमा देखिन सक्छ । उमेरअनुसार बाथको प्रकार र जटिलता फरक–फरक हुन्छ । यसैगरी, महिला र पुरूषमा पनि कुनै बाथ महिलामा बढी देखिन्छ भने कुनै पुरूषमा ।
बाथबाट बच्ने उपाय :
बाथ हुन नदिन त कुनै उपाय छैन । तर, बाथका जटिलताहरुबाट भने बच्न सकिन्छ । समयमा रोगको पहिचान र उपचार गरियो भने बाथ पूरै नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।
बाथको उपचार :
बाथरोगको नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रकारका औषधिहरु र पद्धतिहरु उपलब्ध छन् । रोगको अवस्था र जटिलताअनुसार औषधिको प्रयोग गरिन्छ । बाथ भनेको दीर्घकालीन रोग भएकोले औषधि पनि प्रायः लामो समयसम्म नै चल्छ । तर, लक्षण सुरू भएको ३ महिनामा बाथको उपचार सुरू गर्न सकेमा बाथरोग पूरा नियन्त्रणमा रहेर औषधि खान नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
(बाथरोग विशेषज्ञ, नेसनल बाथरोग सेन्टर, काठमाडौँ तथा समर्पण पोलिक्लिनिक, नारायणगढमा कार्यरत ।)